Xiddig Chelsea U Ciyaara Oo Weerar Afka Ah Ku Qaaday Tababare Antonio Conte & Eden Hazard Oo Sabab U Ah – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Wararka Maanta Xiddig Chelsea U Ciyaara Oo Weerar Afka Ah Ku Qaaday Tababare Antonio Conte & Eden Hazard Oo Sabab U Ah
Xiddig Chelsea U Ciyaara Oo Weerar Afka Ah Ku Qaaday Tababare Antonio Conte & Eden Hazard Oo Sabab U Ah
Xiddig Ka Mid ah kooxda chelsea ayaa si adag u weeraray go,aan uu sameeyay tababaraha kooxda Chelsea ee Antonio Conte intii lagu guda jiray kulankii ay Chelsea guuldarada 2/1 ah kala kulantay kooxda Man United kulan ka dhacay Old Trafford kana tirsanaa horyaalka Premier league.
Goolhayaha Kooxda chelsea ee Thibaut Courtois ayaa si adag u dhaleeceeyay go’aankii Antonio Conte Badalka ugu sameeyay Xiddiga Eden Hazard kulankii ay Chelsea guuldaradu kala kulantay kooxda Man United todobaadkii hore.
Qaab ciyaareed liita oo ay chelsea soo bandhigtay qaybtii hore ayaa keentay in ay Blues soo gaarto guuldaro 2/1 ah kulan ka dhacay Old Trafford iyaga oo haatan ka dhacay 4-ta kooxood ee ugu daraysa horyaalka premier league xilli 10 kulan harsan yihiin dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Antonio Conte ayaa badal ku sameeyay Hazard iyada oo ciyaarta 20 daqiiqo ka harsantahay labada kooxoodna bar-baro 1/1 ah ku socdaan.
Jesse Lingard ayaa goolka guusha u dhaliyay qadiiqadii 75-aad iyada oo chelsea ku keentay in ay garoonka fara madhni kala baxdo inkasta oo ay si adag u ciyaartay qaybtii hore ee ciyaarta.
Taageerayaasha iyo khabiiro badan oo kubada cagta ah ayaa su,aal ka keenay go,aankii uu tababaruhu ku saaray xiddigiisa ugu fiican ee garoonka inkasta oo ayna chelsea todobaad kadib ciyaarayn wax kulan ah.
Laakiin Courtois ayaa haatan weerar ku qaaday tababarihiisa isaga oo sheegay in ay tahay in mar walba Hazard la ciyaarsiiyo 90-ka daqiiqo isaga oo sheegay in uu xiddiga reer Belguim awood u leeyahay in uu ciyaarta wax ka badali karo wakhti dambe.
Courtois ayaa u sheegay Play Sports: “Ka dib goolkii aan dhalinay, waxa nalaga dhaliyay gool rogaal celis ah si la mid ah goolkii Barcelona,Laakiin qaybtii dambe kubad badan maanu haysan laakiin xitaa may ahayn in nalaga badiyo”.
“Hadii aanad samayn waxyaabaha yar-yar, haaaga kulamada waaweyn waa lagaa badinayaa, waana midii dhacay kulankaas”.
“Wax sharaxaad ah uma hayo badalkii Hazard, mana filayn in badal lagu samaynayo laakiin waa dookha tababaraha, waa in uu isagu sharoxo”.
“Xiddigaha Eden oo kale ah waa in ay ciyaaraan 90-ka daqiiqo waayo waxa uu mar walba ciyaarta wax ka badali kara wakhti dambe”.